Barcelona oo caawa 2-0 ku xusul daartay kooxda PSG, una soo gudubtay Semi Final | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Barcelona oo caawa 2-0 ku xusul daartay kooxda PSG, una soo gudubtay...
Barcelona oo caawa 2-0 ku xusul daartay kooxda PSG, una soo gudubtay Semi Final
Kooxda Barcrelona ayaa markale Camp Nou ku dubatay kooxda ree France ee PSG, waxayna Barcelona guushan ku gaadhay 2:0. Neymar ayaa labada gool Barcelona udhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta , waxayna guushani Barca ka caawisay inay tikidhka u goosato wareega afar dhamaadka Champions Leaque-ga.
Barcelona ayaa Camp Nou ku soo dhawanaysay kooxda PSG kulanka lugta labaad ee Champions Leaque-ga. Blaugrana ayaa ca u baahnayd kaliya inay difaacato guushii ay kulankii lugta hore ka soo gaadhay PSG halka ay kooxda Blanc dagaal wayn u ugu jirty sidii ay Barcelona goolal uga dhalin lahayd.
PSG ayaa kulankan iskeentay iyada oo laga doonayo inay guul ku gaadho 3:0 si ay fursad ugu hesho inay wareega afar dhamaadka Champions Leaque-g u soo baxdo waxayna maanka ku haysay dhibata ay la kulmi doonto inay Barcelona oo Camp Nou joogta ka dhaliso goolasha tiraas ah. Luis Enrique ayaa ciyaartoydiisa ku soo dardaaray in ayna sahashan kulanka lugta labaad.Luis Enrique ayaa shaxdiisa ku soo galay 11 ka ciyaartoy.
Kulankan ayay PSG soo qorshaysatay inay difaaca ka soo baxdo laakiin kubbada isdaba jooga ah ee ay Barcelona weerarka ku soo qaadaysay ayaa qorsheheeda wax wayn ka badashay waxaana qasab ku noqoday inay difaac gasho isla markaana ay weerar deg deg ah qaaado marka ay kubbada dib uhesho.
Kulanka ayaa ku bilawday xamaasad badan iyada oo Barcelona markiiba kubbada cagta ku dhigtay, waxayna si gaabis ah u bilawday inay weerar ku qaado goolka PSG.Barcelona ayaa goolkeeda kowaad heshay daqiiqadii 14 aad ee bilawgii ciyaartaba, waxaana goolka furitaanka udhaliyay Neymar kaas oo ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Barcelona hogaanka xili horeba kula wareegtay.
Andres Iniesta ayaa si layaableh kubbad khadka dhexe uga soo qaaday, wuxuuna soo kala seexiyay wuxuuna si aan la rumaysan karin kubbada ugu dhiibay Neymar oo ku jiray xerada ganaaxa PSG, xidiga ree Brazil ee Neymar ayaan wax qalad ah samayn wuxuuna inta uu goolhayaha masaxay kubbada kula bixay goolka oo banaan. waa goolkii afaraad ee uu Neymar ka dhaliyo PSG afartii kulan ee ay xili ciyaareedkan kulmeen.
Barcelona ayaa culayska ku sii haysatay difaaca PSG halka kooxda martida ahi ay u muuqatay inay xili horeba kala daadatay. kadib markii ay fursado isdaba joog ah abuurtay ayay ugu danbayn Barcelona markale heshay fursada labaad ee ay goolka usariftay, waxaana markale gool qurux badan ka dhaliyay PSG Neymar, wuxuuna markan ciyaarta u badalay 2:0 ay Barcelona hogaanka ku dheeraysatay.
Goolkan ayaa ahaa goolkii 30 aad ee uu Neymar xili ciyaareedkan udhaliyo kooxdiisa Barcelona, natiijada celcelis ahaanta ah ee kulanka ayaa noqotay 5:1 ay Barcelona ugu raaxaysanaysa.Dani Alves ayaa kubbad uu si fiican uga soo shaqeeyay madax u soo saaray Neymar kaas oo isaguna kubbada si fiican madaxa ugu darbeeyay sidaa ayuuna markii labaad shabaqa ku soo taabtay.
PSG ayaan qaybta hore soo bandhigin qaab ciyaareedkii laga filayay, waxayna u muuqatayba koox hore u sii quusatay, balse ay qasab ku tahay inay kulanka ciyaarto. Barcelona ayaana heshay fursado tiro badan oo ay qaybta hore goolal tiro badan ku dhalin kari lahayd laakiin difaaca iyo goolhayaha PSG ayaa fursado fiican iska badbaadiyay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayuu luis Enrique ciyaarta ka saaray Adres Iniesta oo qaybtii hore ee ciyaarta ilayska siinayay, wuxuuna ku soo badalay Xavi Hernandez., waxa kale oo marii ay ciyaartu wax yar socotay ciyaarta ka saar Sergio Busquets kaas oo uu ku soo badalay Sergi Roberto wuxuuna doonayay inay ciyaartoyda muhiimka ah ciyaarta kala baxo mar haddii ay natiijadu kooxdiisa la jirtay.
PSG ayaa bilawday inay weerar soo qaado si ay ugu yaraan guul daro uga badbaado, waxayna abuurtay fursado fiican, firsadaha ugu fiican ayay sameeyeen Ibrahimovic iyo Verratti laakiin haddana umay suurtogalin inay xataa hal gool dhaliyaan. Barcelona ayaa qaybta danbe u muuqatay mid aan wax walwal ah qabin, waxayna umuuqatayba inay nasasho ku jirtay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:0 ay Barcelona markii labaad xili ciyaareedkan Camp Nou k ku garaacday kooxda PSG, waxayana Barcelona u soo baxday wareega afar dhamaadka Champions Leaque-ga. Barcelona iyo Bayern Munich ayaa afar dhamaadka UCL ku sii sugi doonaha kooxda Real Madrid,Atletico madrid, Juvnetus iyo Monaco oo iyagana la habeen danbe la ogaan doono labada kooxood ee soo bixi doona.